Umasipala wengenze amathuna – Sivubela intuthuko Newspaper
uMnu Thembinkosi Ngcobo oyiNhloko yoPhiko lweZokuNgcebeleka kanye namaGugu ngaphansi koMkhandlu weTheku osuvule izikhala zokungcwaba ezifinyelela ku-8000.
Umnyango ezokungcebeleka amasiko ,amapaki kanye namagugu usuvule izikhala zokungcwaba ezifinyelela ku-8000. Lezi zindaba eziyimpendulo kwingwadla yokushoda kwendawo yokungcwaba ziqinisekiswe nguMnu Thembinkosi Ngcobo okunguyena oyiNhloko yoPhiko lwezamaPaki, ezokuNgcebeleka kanye nezamaGugu.
Kuzokhumbuleka ukuthi bese kuphele iminyaka eminingi kakhulu iDolobha iTheku libhekene nale nkinga kangangoba ngonyaka owedlule uMnu Ngcobo waze waveza ukuthi kusele izikhala zokungcwaba ezingu-5000 nje kuphela zokungcwana, nokuyinto eyadala itwetwe kubahlali bakuleli dolobha.
Njengoba uMasipala weTheku sewukwazie ukwengeza ngezikhala ezingu-8000 lokhu uMnu Ngcobo ukuchaze njengokuphumelela komsebenzi omqoka kakhulu. Echaza uthe: “Sithathe isinqumo sokuthi kube khona esikwenzayo ngenhloso yokuxazulula inkinga yokugqoza kwezikhala zokungcwaba eThekwini. Sisebenzisane nemindeni ukugubha kabusha amathuna akuLoon Road. Amathuna esiwagumbile yilawo esekuphle iminyaka engu-10 kuya phezulu aba khona.”
Eqhuba uthe: “Sivumelene ngokuthi imindeni izokwazi ukuthola ithuba lokuthi yenze amasiko awo uma esengcwaba kabusha abagunjiwe ngoba bazofakwa kwenye indawo ezoqinisekisa ukuthi baphumula ngokuthula.”
Uphinde waveza izindaba zokuthi ikhona indawo asebeyihlonzile ezosetshenziselwa ukungcwaba. Uthe banesiqiniseko sokuthi leyo ndawo ingakwazi ukuba isetshenziselwe ukungcwaba kuze kuhlangane iminyaka engu-30.
Nokho okwamanje uthe bamatasa basenza ucwaningo lokuwuhlola kabanzi lo mhlaba ngenhloso yokuthola ukuthi ngabe ukulungele kangakanani ukuba ungasetshenziselwa ukungcwaba abantu. Ngokusho kwakhe uMapholoba kungumsebenzi osemahlombe abo njengoMasipala ukuqinisekisa ukuthi abantu bafihlwa ngesizotha futhi bafihlwe endaweni efanelekile negculisayo.
“Ayikho into emqoka ngaphezulu kokuba abathandiweyo bethu bathole ukuphumula okubafanele besendaweni eyamukelekile,” echaza. Esephetha uthe uyethemba ukuthi nabangcwabi baseThekwini kubona kuzoke behle ubuthongo uma bezwa lezi zindaba. Ube eseba nomyalezo omqoka awubhekise ngqo kubangcwabi baseThekwini.
“Sibhekene nenkinga yesibalo esikhula mawala sabangcwabi abangekho emthethweni. Siyacela kubona bonke abangcwabi ukuthi beze bezobhalisa ngokusemthethweni.”